Dhacdadii naxdinta iyo argaggaxa lahayd ee ka dhacday Manchester iyo xaalka dalka Britain ee ku wajahan Muslimiinta. ( A Goth ) | Awdalpress.com
Dhacdadii naxdinta iyo argaggaxa lahayd ee ka dhacday Manchester iyo xaalka dalka Britain ee ku wajahan Muslimiinta. ( A Goth )
Waxa Daabacay staff-reporter on May 29th, 2017 and filed under Daily Somali News, Editorial, Education, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Waxan muddo ku dhaw 18 sano ku noolahay dalka Britain, intii aan ku noolaa aniga iyo reerkaygu maalinna lammaannaan kulmin wax dhib ah, ammaan darro ah amma cabsi ah. Xataa ayaamaha adag ee dalku wajaho duruufaha argaggixiso ee tan Manchester oo kale ah, ee Muslimiinta loo tiriyo ma aragno dhib iyo wax la mid ah.
Laakiin waxa aan dadka ka maqlaa amma saxaafadda kala kulmaa, sheekooyin, doodo iyo digniino loo jeedinayo dadka Muslimiinta ah. Masaajiddada qaar ayaa laga cambaareeyaa falalka noocan oo kale ee mararka qaarkood ka dhaca England amma Europe ta kale.
Haddii aan u soo noqdo dhacdadan argaggaxa ku reebtay shacabka ku nool England iyo dunida nabadda jecel, waxa ay dhacday 24kii May, oo ku beegnayd laba cisho ama saddex casho ka hor bisha Soon, oo ay Muslimiintu u diyaar garoobayeen gudashada bisha Ramadaan. Lamana filanayn in falka noocan ahi uu dhaco wakhiga loo diyaar garoobayo bishan barakaysan ama xilli kaleba. Dad badan oo aan la kulmayna sidaasi ayey qabaan.
Qof kasta oo damiir ama damqasho lihi waxa uu dareemayaa in is-qarxinta waxshinnimada leh ee Manchester garoon ku yaalla ka dhacday in aanay ahayn mid la qaadan karo, weliba in dad carruur u badan la beegsadaana ay tahay axmaqnimo iyo noqonniimo aan ka soo fulin shakhsiyaad caafimaad qaba.
Immiga way dhacday balse mustaqbalka waxa la is weydiin karaan su’aalahan; Sidee looga hor tagaa dhib danbe oo ay mujrimiini soo maleegaan? Muslimiinta magacoodii la wasakheeyeyse qayb ma ka qaadan karaan soo qabashada kuwa ka danbeeya falalka noocan ah? Dhallinta la adeegsanayo ee laga caqli badiyeyse wax ma laga qaban karaa?
Sida aan aamminsanahay wiilka is qarxiyey iyo kuwa dalalka dunida kale isku qarxiya ee aan gaadhin 25 jirka, waxa ka danbeeya odayaal iyo maafiyo ku adeeganaya, ka macaashaya dhiigga dadka aan danbiga lahay. Waxana ay ku sugan yihiin meel kasta oo magaalo ah, iyaga oo iska dhigaya in ay bulshada u adeegayaan, barayaan diinta ama shaqooyin kale haysta. Dadkaasu waa aqoon yahanno, xirfadlayaal iyo wax la mid ah oo ku xidhan shabakado argagixiso. Hawlaha qalloocan ee ay ku jiraan amma laga fuliyo dalal kale iyo goobo ka mid ah dalka Britain gudihiisa. Ayaa u baahan in juhdi iyo dadaal xooggan la geliyo, oo aan maalinta ay dhacdo uun ciidan badan lagu soo dayn suuqyada.
Siday u dhacdaa in UK oo ammaankeedu sugan yahay loogu dhex sameeyo qalabka la isku qarxinayo iyo wax la mid ah? Haddii ay dhacday, horena ay uga dhacday dalal kale oo Euope ah, miyaanay habboonayn in wada tashi rasmi ah iyo is kaalmaysi lala yeesho dadka xog ogaalka noqon kara ee ka soo jeeda mujtamacyada kala geddisan ee ku wada nool UK.
Bal hadda ila akhrista qoraal kooban oo qoraa Somaliyeed ku soo qoray facebook-giisa:
Subaxnimadii 24 ka bisha May, oo ahayd maalintii ka danbaysay markii weerarkii waxshinimada badna lagu laayay dad aan waxba gallabsan magaalada Manchester ee waqooyiga dalkani ingiriiska, ayaan sida ii caadada ah maalin kasta oo arbaca ah aan usoo jarmaaday inaan wax ku akhristo Library badhtamaha magaaladayda Coventry ku yaalla.
Wakhtigu waa barqo, cadceedu falaadhaha la soo baxday, dhulkana aad u diiran yahay, dad aad u tiro badan ayaa goobaha lagu qaxweeyo kuraasta iyo miisaska dibadda ula soo baxay si ay falaadha cadceeda ugu raaxaystaan, cadceeda oo sannadkiiba wakhtigan uun lagu arko dalalka galbeedka.
Gurigayga iyo goobta Coventry Central Library ku yaallo waxay isku jiraan masaafad aad u yar oo ilaa toban daqiiqo oo lug ah.
Intaan jidka ku soo jiray ayey indhahaygu qabteen waxaanan 11 kii sannadood ee aan ingiriiska degena aanan indhaha saarin, waa ciidamo Booliis ah oo ku jeeni qaaran qoryaha darandooriga u dhaca, oo si aad u qurux badan ugu labisan dhar madaw, wajigooda waxaa ka muuqatay dhoola-caddayn ay dadka tusayeen inay u joogaan inay ammaankooda sugaan.
Markaan soo gaadhay gudaha faras-magaalaha magaalada Coventry, ayey indhahahaygu qabteen in dareenka guud ee dadku yahay mid aad u kacsan, waxaan ku noola magaalada Coventry 8 sannadood, weligay ima soo marin maalin dadka ingiriiska ah ee waddanka iska leh jinsi ahaan aad wajiyadooda ka akhrisanaysay cadhada iyo waji-gabaxa, maalinta maalin aan ahayn.
Markaan soo gaadhay Libraryga ayaan ugu imid qof dumar ah oo dadka waddanka jinsi ahaan iska leh ah, oo da’deeda aan ku qiyaasay ilaa 65 sanno jir, waa labadayada oo qudha, waxaanu wada sugaynay wiishka (The lift) si uu dabaqa koobaad noo geeyo.
Markii wiishku noo yimid ee aanu labadayaduba gudaha u gallay, ayey intay kor ilaa hoos ii eegtay igu tidhi “ma ka war haysa wixii xallay dhacay” waxaan ugu jawaabay “haa waan ka war haya, wuxuu ahaa fal bahalnimo ah, waxaan ahay Aabo dhallay 3 caruur ah oo yaryar, waanan dareemaya xanuunka iyo hiifta ay dareemayaan dadka aan waxba gallabsan ee lagu laayay ehelkoodu” intay igu soo durugtay oo ay gacanteeda garabkayga saartay oo ay ilmo indhaha ka soo daatay ayey igu tidhi “waan ogahay inay kuwii falka waxshnimada ah sameeyey ay dileen muslimiin ka badan inta ay reer galbeedka u laayeen, waxay doonayaan inay Muslimka iyo intaan muslimka ahayn ee dunida iska hor keenaan”.
Britain iyo Nolosha dadka Muslimka Ah
U Malayn maayo dunida galbeedka dad ahaan iyo dal ahaan inuu jiro dalkani ingiriiska iyo dadkiisa cid ka gobsan oo aan weligay la nooladay, 11 sannadood oo aan ku noola, weligay maan arag, lamana kulmin wax diintayda, midabkayga iyo shakhsiyadayda igu cunsuriyadeeya.
Weligay qof ingiriis ah oo aanu saaxiibnay ha noqdaan kuwa ila dariska ah ama kuwaanu is barano oo igu yidhi ma arag “halkeed ka timid?” iyo maxaad u timid ingiriiska?”.
Britain waxaa ku nool 3 malyuun qof oo Muslim ah, waxaa ku yaalla masaajido ka badan 2 kun oo masjid, magaalooyinka qaarkood sida magaalada Birmingham, ayaa masaajidada ku yaalla qaarkood ay isku jiraan wax afartan tallaabo ka yar.
Ilaahayban ku dhaartay, xaq lagu caabudo eh, aroortii ama gelinka danbe markaan ka ugu weyn caruurtayda ka soo qaadayo iskuulka, macalimiinta iskuulku sida ay isoo dhaweeyaan cir iyo dhul ayey iga qaadaan, kayga yar isagoo ay laabta geliyeen oo mabsuud ah ayaan ka soo kaxeeya.
Britain ama ingiriisku, waa dalka haddaad dibadda ku tukato, aan cid ku soo eegaysa, ama ku odhanaysa maxaad ugu tukatay dibadda aanay jirin, goob kasta hadda waa shariikad kasta oo shaqo oo ingiriiska gudaheeda ku taalla, waxaa ku dhex yaalla masjid loogu tallo gallay inay shaqaalahu ku dhex tukadaan.
Waxaan ka hawlgallaayay oo aan ka shaqayn jiray bangiga Barclays intii u dhexaysay 2009 laa 2013 kii, waxaan xasuustsa sallaadda Duhur markaan masaajidka oo ku yaalla dabaqa hoose u tukasho tago, waxaan arki jiray shaqaale gaar ah oo xita sijaaayadaha ka bedelaya oo kuwa maydhan keenaya, iyo qaar masaxaya oo nadiifinaya goobta ay ugu tallo galleen in lagu waysaysto.
Maalintaan shaqada bilaabay, ayaan u sheegay gabadhii madaxda ii ahayd (My line manager), inaan tukanayo laba sallaadood (Duhur iyo Casar) intaan ku jiro shaqada, intay soo kacdo, ayey iyadu i xasuusin jirtay oo ay odhan jirtay “Mo its your praying time, go and pray please”
Haddaad magaalooyinka waaweyn ee Britain xaafadaha qaarkood dhex marto sida degmada Newham ee magaalada London ama xaafadda Small Heath ee magaalada Birmingham, %80 ama ka badan dadku waxay xidhanyahiin dharka muslimka ah sida khamiiska iyo cabaayadaha.
Siyaasadda Muslim Necaybka
Kooxaha xagjirka ah ee loo yaqaano (Far Rights), awood badan oo siyaasadeed kuma laha dalkani ingiriiska, badankoodna awoodooda jiritaan xita waxay sii wiiqmaysay sannadahii ugu danbeeyey, ka dib markii ururka loo yaqaanay EDL ama (English Defence League) oo loo sameeyey Muslim necaybku ay daaqadda ka baxeen, hogaamiyahoodiina is casilay.
Dadka ingiriiska ee caadiga ah waxay ku odhanayaan kooxaha xagjirka ah ee dhinaca midigta xiga ee dalkani ingiriiska iyo kooxaha magaca islaamka sheeganaya ee dadka aan waxba gallabsan laynaya, waa isku mid, waa isku hadaf, waxaana ay doonayaan labadooduba inay dadka kala qaybiyaan.
Markii ugu horaysay taariikhda dalalka reer galbeedka ah ayaa magaalada London ay dooratay Maayar Muslim ah (Sadiq Khan) oo weliba doorashadii kaga adkaaday musharaxii xisbiga Conservative ka Zac Goldsmith, oo ah nin asalkiisu yuhuudi ah isla markaana ka soo jeeda qoysaska ugu ladan dalkani ingiriiska.
Dabayaqadii 90-naadkii ilaa horaantii Mileniumka waxaa ingiriiska ku soo qul qulay boqolaal kun oo Muslimiin u badan oo ka yimid dalalka waqooyiga Yurub oo Soomaali badani ka mid ahayd, dadkaasi waxay uga soo haajireen dalalkii ay joogeen sida Sweden, Norway, Finland, Holland, Denmark iyo qaar kale oo badan, in dalkani ingiriisku dhinaca diinta iyo akhlaaqda xita dhinaca iskuuladda kaga fiicanyahay.
Ugu danbayn, dadka ingiriisku waa dad ugu gobsan cid lala noolaado, waxaan ku noola dalal badan oo Islaam ah, la bar bar dhigi kari maayo, gobtu hadday gob tahay si gobonimo leh ayaa loola noolada, waxaan usoo jeedinaya dadka walaalahayga ah ee Soomaalida ah ee ku nool Britain inaynu ilaalino oo xaq dhawro, oo ixtiraamno dadka aynu martida u nahay ee sida gobonimada leh inoola dhaqmay, ee inoo ogolaaday in jinsiyadahoogii ay ina siiyaan oo inaga dhigay dad iyaga la xuquuq ah, wallaahi ayaan ku dhaartaye inaan laga hellayn gobonimada dalal badan oo ay islaamnimadu inaga dhexayso.
Waxaan u joogay qof Soomaali ah oo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya degenaansho ku lahaa oo loo diiday in cisbitaalkii dawladda lagu daweeyo, maadama aanu jinsiyad Sacuudi ah haysan, waxaan u joogay dad Soomaali ah oo muslim u badan oo Sacuudiga sida xoolaha looga soo musaafurinayo.
Bal hadda u fiirso, qofka halkani yimaadda ee ay sharci siiyaan, wax walba bilaash ayuu ku hella, dawadda, dhakhtarka, cisbitaalka, iskuulka, jaamacadda, guryaha oo ay siiyaan guryo ijaar jaban, dadka aan shaqaysan oo ay siiyaan nolol maalmeed ku filan, guryaha oo ay kiradda ka bixiyaan, dadka jilicdasan ee aan is bixinayn oo ay lacago iyo gunnooyin iyo gargaaryo kala duwan siiyaan, qofka Britain ku nool ee sharci ku leh , sharcigu doono ha haystee, wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqaysto, si aan xad lahayn, wuxuu xaq u leeyahay inuu noloshiisa siduu doono u horumariyo, wuxuuna gacan ka hella dawladda.
Waxaa intaasi dheer xorriyatul qawlka, haddaad intaad boodh weyn oo far waaweyn ku qoran “Ha dhacda dawladda raysal wasaare May” aad qaadato aad dariiqyada ugu dadka badan ee ingiriiska la wareegto, cid ku odhanaysa maxaad ugu qortay, iyo cid kugu soo daba gallaysa, iyo cid kugu cadhoonaysa walle inaanay jirin, lagaba yaabe inay qaar dadku kugu biiraan oo ay sacabka ku tumaan.
Ingiriisku waa dalka keliya ee aad daqiiqad kasta intaad Booliiska u tagto aad ka dalban karto inaad qabanayso banaanbax, ee weliba lagu soo dirayo booliis ku ilaaliya, oo aan hal gini laga qaadayn, in adiga weliba wax lagugu darro mooyaane, waxaa jira boqolaal urur oo dawladda barnaamijyadeeda ka banaanbaxa oo ay haddana dawladdu ku siiso lacago, sababtuna waxaa weeyi in ay dawladdu ka dhex ogaato dareenka dadkeeda.
Waxay ahayd dhawr maalmood ka hor anigoo badhtamaha magaalada Birmingham lugaynaya aan arkay basaska (Buses) iyo tareenadda oo lagu qoray fariimo “Nebigeena Muxumed” CSW lagu ammaanayo.
Gobonimada yaan gunnimo loogu bedelin, Ingiriisku waa gob.
Markii aad qoraalkaa akhriday maxaa kaaga baxay?
Xaqiiqada uu Diridhaba soo bandhigay waa mid jirta, oo qof kasta oo dalka Britain ama UK ku nooli uu ka dharagsan yahay. Dawladda iyo shacabka noocaasi ah ee la magansadayna ma gayaan in loogu abaal gudo qaraxyo iyo ammaankooda oo la carqaladeeyo.
Dadka ku dooda in qaraxan oo kale loogu aar-gudayo Siriya, way lunsan yihiin. Bur burka dalkaasi ka dhacay iyo is xasuuqa ka taaganna waxa sabab u ah shacabka Siriya iy dawladdooda. Waddammada muslimiinta ah ee dagaalladu ka socdaanna waa la mid, dawladaha dunida ee ka damqanayaana waxa ay doonayaan in ay badbaadiyaan shucuubtaasi. Inta karaankooda ahna way badbaadiyaan, naftooda iyo maalkooda ayeyna u huraan.
This post has been viewed 6921 times.
Categories: Daily Somali News, Editorial, Education, OPINION